Top Senuti u Tools Windows inuu ka soo kabsado Music ka iPhone iyo iPod
> Resource > Transfer > Top Senuti for Windows Barnaamijyada inuu ka soo kabsado Music ka iPhone iyo iPod
Senuti yar laakiin waxtar leh qalab adeeg oo caawinaya dadka isticmaala soo kabsado music, playlists, iyo video ka iPods iyo iPhone. Diyaariyay sanadkii 2004, waxa uu ka caawiyay malaayiin dadka isticmaala si aad u hesho music ka iPods iPhone ama dib u Lugood Library. Si daacad ah u noqon, waa waajib si loo iPod iyo iPhone isticmaala inay muusikada gacanta. Si kastaba ha ahaatee, Senuti hadda waddaa kaliya ee OS X Mac 10.5 iyo ka dib. Haddii aad tahay qof user Windows ah, ma waxaad isticmaali kartaa Mac version Senuti ah, laakiin barnaamijka Windows Senuti ah. Nasiib wanaag, waxa jira dhowr doorasho oo aad kala dooran karto:
# 1. Senuti for Windows barnaamij Wondershare TunesGo
# 2. Senuti u PC Transfer - SynciOS iPod Transfer
Rover Songs ka iPod iyo iPhone la Senuti for Windows
# 1. Best Senuti for Windows Tool - Wondershare TunesGo
Best Senuti ee Pro Windows waa Wondershare TunesGo . Maxay tahay sababta aan ku dheh oo? Wondershare Hawlaha TunesGo la mid ah sida Senuti - kabsaday music iyo playlists ka iPod iyo iPhone, iyaga dib ugu Lugood Library helo. Laakiin, ka sokow in, TunesGo saamaxaya kuwa isticmaala inay nuqul ka music iyo playlists la ratings, play soo oogay, iyo farshaxanka, iwm si Lugood Library kaliya 1 click. Iyo Wondershare TunesGo saamaxaya kuwa isticmaala inay nuqul ka songs, playlists, videos, Lugood U, Podcasts, sawiro, iyo in ka badan si ay u computer users '. Waxaa intaa dheer, haddii dadka isticmaala ku rakiban Wondershare TunesGo kombiyuutarka oo aan waa mid ka mid ah in loo isticmaalo in lagu hagaagsan oo isticmaala iPhone ama iPod ah, dadka isticmaala si iPhone ama iPod gelin karaa music toos ah oo aan tirtiro xogta asalka ah. Sidee cajiib yahay! Waxa ay taageertaa oo dhan iPod, iPhone iyo iPad ku salaysan arrimo 5 iyo ka dib.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad lacag la'aan ah si aad u aragto sida ay u shaqayso on Windows PC!
# 2. Senuti u Transfer PC - SynciOS iPod Transfer
Kala iibsiga SynciOS iPod , sida ay magaca uu tusinayaa, waa Senuti ah barnaamijka Windows sidoo. Waxay ka caawisaa dadka isticmaala si ay u gudbiyaan files warbaahinta, sida music, podcasts, video, Lugood U, iwm in computer ah. Laakiin music iyo playlists kuma wareejin karaan si toos ah u Lugood Library. Iska daaya masaf gabayadii labalaabka. Ka dib markii la isticmaalayo iibsiga SynciOS iPod si aad u hesho music aad kombuutarka, waxaad u baahan doontaa in aad ku daraynaa in aad Lugood Library. Ma heli info ay website u Lugood taageero 12 iyo macruufka dambeeyay 9. Waxaad ku isku dayi kartaa in aad aragto in aad qalab Apple waxaa taageera ama aan.
PodTrans dhigantaa Senuti ah dadka isticmaala Windows. Waxaa si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala iPod inay ka PC wareejiyo music in iPod iyo qeybsanaan ku xigeenka. Hadda waxa ay taageertaa dambayn iPod nano 7 iyo iPod xiriiri 5. Sida SynciOS, waxa nuqul ka kaliya music ka iPod in computer, ma in Lugood Library. Sidaas darteed haddii aad ku socoto in ay isku dayaan, waxa aad helaysaa in songs dari ka your computer si aad Lugood Library gacanta. Haddii aad rabto in aad si toos ah u gudbiyaan music aad Lugood Library, waa inaad ku bixisaan ah, anagana yar si ay kor si PodTrans Pro.
Xiriirada Transfer ka Nokia in Samsung